Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Taiwan » Ny Commuter Train vaovao any Taiwan dia misy ifandraisany kely amin'i Alemana miaraka amin'i TUV Rheinland
Afaka mampiasa ny Pink Light Transmitter ny vehivavy bevohoka any Taiwan mba hampirehitra ny jiro ary hampahatsiahy ny olona tsy manana laharam-pahamehana hiala ny seza. Ity no nolazain'ny mpanome tolotra fa fiaran-dalamby tsara indrindra any Taiwan.
Niainga tamin'ny 1 aprily ny lamasinina voalohany ary hampiakatra manodidina ny 40% ny fiaran-dalamby tsirairay.
Ny fiaran-dalamby EMU 900 vaovao an'ny Taiwan Railways Administration dia nandalo fitsapana sy fizahana fitsarana hatramin'ny nahatongavan'izy ireo avy any Korea tamin'ny 24 Oktobra tamin'ny taon-dasa.
Izy ireo izao dia nandalo ny fizotran'ny fanamarinana ny fiarovana an'ny TUV Rheinland izay manome antoka fa ny lafiny rehetra amin'ny zava-bitany dia mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny asa aman-draharaha azo antoka.
Any Taiwan, ny EMU vaovao dia mampiditra endrika tsy azo idirana toa ny Pink Light Receiver amin'ny seza laharam-pahamehana.
Afaka mampiasa ny Pink Light Transmitter ny vehivavy bevohoka mba hiteraka jiro ary hampahatsiahivana ny olona tsy manana laharam-pahamehana hiala ny seza.
Ny endri-javatra hafa dia misy ny fanaovan-jiro kabary manamboatra tena, faritra idirana kilemaina, intercom tsy misy tariby tampoka amin'ny fifandraisana amin'ny mpitarika lamasinina, ary toerana fitahirizana bisikileta nitarina. Ireo seza mpandeha koa dia namboarina, novolavolaina ary noforonin'ny orinasa iray eo an-toerana alohan'ny fandefasana azy ireo any anaty kaontenera ho any Korea hametrahana azy. Fitaovana an-tsambo toy ny fitoeran-drano 500L sy fitaovana faneriterena mamatsy ny trano fanasana, ny tavy septic vacuum ho an'ny kabine, ary ny fitaovan'ny fahadiovana dia nalaina ihany koa teo an-toerana.
Ny lamasinina roa voalohany dia notendrena EMU 901 sy EMU 902. tsirairay avy Fiaran-dalamby EMU 900 dia hisy kalesy 10, ao anatin'izany ny fiara maotera 5 sy ny fiara fitateram-bahoaka miisa 5, izay mahatonga azy io ho EMU an'ny kaomuter mifototra maharitra indrindra miasa ao Taiwan ankehitriny. Ny taxi cabs amin'ny lafiny roa amin'ny fiaran-dalamby dia natao miaraka amina firafitry ny fianjerana, raha toa kosa ny fitaovana manamarina dia efa nandalo andiam-panamarinana fiarovana sy fiasa izay miantoka ny fitoviana azo antoka, azo antoka ary fampandehanana ary fikajiana fikajiana.
TUV Rheinland Taiwan dia mitazona fankatoavana ISO / IEC 17020 avy amin'ny TAF (Taiwan Accreditation Foundation) ho fanamarinana amin'ny rafitra fahatelo ny rafitra lalamby any Taiwan. Ny serivisy eo an-toerana dia azo omena ara-potoana amin'ny alàlan'ny ekipa manam-pahaizana tena mahay ao an-toerana izay nandray anjara tamin'ny fanamarinana ireo tetikasa lalamby marobe. Ho fanampin'ny EMU 900, omena koa ny serivisy fanamarinana sy fanamarinana ho an'ny TRA ho an'ny fiaran-dalamby EMU 3000 (Hitachi), ny fanavaozana ny module EMU 500 miampy ny fanamarinana famokarana herinaratra SIV (Static Inverter) ary koa ny fidirana fanovana varavarana. Ny TUV Rheinland koa dia nanomboka nanara-maso ny fanamboarana ny lalamby Alaotra Taipingshan Bong-Bong ho an'ny Biraon'ny Distrikan'ny Ala Luodong tamin'ny taona 2020. Ity tetikasa ity dia eo amin'ny sehatry ny famokarana, ary ireo lamasinina vita dia nandalo ny fitsapana ny ozinina ary avy eo dia hatolotra ny Taipingshan Forest Railway ho an'ny fizarana laharana lehibe tantanan'ny faran'ny 2021.
Ny tetik'asa fanamarinana fitaovana momba ny lalamby izay vitan'ny TUV Rheinland taloha dia nahitana ny fandraisana anjara, ny lalamby, ny valizy mizaha tena, ary ny mpanara-maso lozisialy azo tanterahina (PLC) ho an'ny rafitra fanaovana sonia haingam-pandeha haingam-pandeha, ny rafitra fanaraha-maso sy ny rafitra fanaraha-maso (TCMS), ary ny rafitra fifandraisana an-tserasera . Ho valin'ny hetahetan'ny R-Team any Taiwan izay mikendry ny hahatratra ny vokatra eto an-toerana ireo vokatra misy ny lalamby, niaraka tamin'ny fikambanana R&D eo an-toerana i TUV Rheinland farany teo mba hanomezana tolotra fiarovana, fitiliana ary fanamarinana. Anisan'izany ny serivisy fanamarinana fampandrosoana ho an'ny rafitra varavarana lamba (PSD), rafitra varavarana ary rafitra pantograf.